General - Ngwa Ngwa | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji 4)
Ọ bụrụ na koodu QR na-adọrọkarị uche gị mana ịnweghị mkpa ịme ihe ọ bụla, n'isiokwu a anyị na-egosi gị otu esi emepụta koodu QR.
PickASO na TheTool amalitela mbipụta mbụ nke TheAwards Awards iji mata ngwa ngwa na egwuregwu kachasị mma na Spain.
Nọnyere anyị ma chọpụta akụkụ nke Samsung Galaxy Note 9 dị mma karịa iPhone XS na ntụgharị ihu, ezi ihu ihu na ihu.
Ambi Climate 2 na-eme ka ikuku gị dị mma ma mara mma, anyị nwalere ya
Anyị na-egosi gị Ambi Climate 2, ngwaọrụ nwere Artificial Intelligence nke na-eme ka ikuku ikuku gị mara ihe ma ga-enye gị ohere ịchekwa ọkụ eletrik.
Na post a, ị ga - achọta nduzi doro anya banyere Chromecast na ihe niile ị nwere ike iji ngwa Google a mara mma.
Anyị na-enyocha Energy Tower 7 True Ikuku site na Energy Sistem, ezigbo atụmatụ na ọtụtụ ike
Anyị nwere ọhụrụ Energy Tower 7 Ezi Ikuku na aka anyị ma anyị na-enye gị nyocha kachasị ike zuru oke nke ị nwere ike iji tụọ nzụta gị.
Tụkwasị Fuseo, anyị nyochare oriọna a na ọdụ ikuku na-akwụ ụgwọ wireless
Anyị nwere oriọna Trust Fuseo nke ọkụ ọkụ nke ọkụ nke gụnyere chaja wireless Qi na nkwụnye USB, nọrọ ma chọpụta na nyocha a.
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara netwọkụ 5g
Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ ịkọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara netwọkụ 5G, njirimara ha na etu esi enweta ọtụtụ ha.
4 × 4 redio na-achịkwa nyocha ụgbọ ala XinleHong 9125
Taa, anyị nwalere XinleHong 9125, ike 4 × 4 redio na-achịkwa ụgbọ ala nke na-apụ apụ maka ihe ụtọ ya na ịdị mfe nke iji ya, ọ…
Ndị a bụ atụmatụ, ọnụahịa na nnweta nke Apple iPhone Xs ọhụrụ, iPhone Xs Max na iPhone Xr. Ihe niile ị chọrọ ịma.
Apple Watch Series 4: Nkọwapụta, ọnụahịa na mbupute gọọmentị. Chọpụta ihe niile gbasara ọhụụ ọhụụ Apple.
Soro ihe ngosi nke ndu ohuru nke iPhone na Actualidad Gadget
Echi, a ga-egosipụta ọhụụ ọhụrụ nke iPhone maka afọ a, ọgbọ nke dịka ọtụtụ asịrị si kwuo, a ga-enwe ụdị 3.
Uten N'ịga Pro, a nnọọ zuru ezu ọrụ mgbaaka na a ala na-eri
Uten N'ịga Pro egwuregwu smart mgbaaka nyochaa, oké arụmọrụ na a TOP price. Dakọtara na iOS & gam akporo, nkọwa niile ebe a
Ọ dị ịtụnanya na anyị agafela ọkara nke afọ a 2018 mana ọ bụrụ na e nwere ihe anyị na - enweghị ike ...
Otu igwe metere International Space Station, mebie fuselage ya ma mepụta obere oghere nke ikuku niile gbapụrụ.
Amazon Prime na-ebili na ọnụahịa na akpịrịkpa ruo € 36 kwa afọ
Ọ bụrụ na ịnwere ma ọ bụ na-eche echiche ịnweta ndenye aha maka Amazon Prime, ị kwesịrị ịmara na ọnụego a bulitere: ọ bụghị naanị ịkwụ ụgwọ 19,95 kwa afọ.
Samsung Galaxy Tab S4 dị ugbu a na Spain
Ka ọ dị ugbu a, n'ahịa naanị ụzọ dị egwu dị egwu, ma ọ bụ mma iji kpọọ ya n'ụzọ ụfọdụ, n'ahịa nke ...
Sonos Beam, anyị na-agwa gị njirimara ya, ọnụahịa ya ma anyị na-enyocha nkọwa ọ bụla iji mara ihe kpatara okwu dị ukwuu banyere ngwaahịa a.
Mụọ otu esi ekerịta vidiyo gị site na IGTV, ihe ntanetị ọhụụ ọhụụ ọhụrụ nke Instagram, na ibe Facebook gị.
Nnyocha Star Wars Drones
Dị ka ezigbo onye na-akwado Star Wars saga, ule nke drones a abụwo ihe pụrụ iche. Mba…
WhatsApp na Google sonyeere ndị agha, nkwado ndabere agaghị eri
Google na WhatsApp ka kwuputara mmekorita nke ga - enyere anyị aka ịchekwa WhatsApp nkwado na Google Drive na - enweghị ebe anyị bi.
Barcelona na ndị ọzọ kpọmkwem Granollers, bụ ebe a họọrọ maka ụlọ ahịa Mi na-esote
Ternyaahụ Xiaomi Mi 8 bịarutere na obodo anyị ma taa anyị nwetara akụkọ banyere ...
Gmail maka gam akporo emeela ka anyị mezie izipu ozi ịntanetị
O doro anya na ọ meela karịa otu n'ime gị na tupu ị gụọ ozi email iji chọpụta na edere ya n'ụzọ ziri ezi nakwa na ọ gosipụtara ihe niile n'agbanyeghị na ọ ga-egbu oge, yana mgbe enwere ya na gam akporo, Gmail maka gam akporo mechara nye anyị ohere ịkagbu izipu ozi-e ezigala
European Union chọrọ ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya wepu ọdịnaya extremist n'ime otu awa
Netwọk mmekọrịta na ngwa izipu ozi abụrụla ụzọ kachasị mma iji kwurịta okwu, ọ bụghị naanị na ndị enyi anyị na ndị ezinụlọ anyị, mana European Union na-arụ ọrụ na mpempe akwụkwọ ga-amanye weebụsaịtị niile ihichapụ ọdịnaya extremism na ihe na-erughị otu awa site na mbipụta.
Anyị na-ewetara gị nchịkọta nke ihe nkiri kachasị mma ị nwere ike ịlele na isi ndị na-eweta ọdịnaya dị ka Netflix na HBO.
Ole ụdị HDR dị na gịnị bụ ọdịiche?
E nwere ụdị HDR dị iche iche, nke ọ bụla nwere ikike ya mana ha niile nwere otu isi, ka anyị hụ ka ha si dị iche.
Mashable dọrọ aka na ntị banyere oke mbanye anataghị ikike akaụntụ Instagram
O yiri ka a na-akpali ehihie taa maka ọtụtụ narị ndị ọrụ nke netwọkụ mmekọrịta ọha ama ama ama ama Instagram, na ...
Teknụzụ a nwere ike ịchekwa ọdịnaya nke ụbụrụ gị
Companylọ ọrụ America a na-azọrọ na ha nwere ike ịchekwa ọdịnaya nke ụbụrụ gị ma chekwaa ya ọtụtụ narị afọ.
Have nwere Samsung Galaxy ngwaọrụ? Budata Fortnite APK
Nke ahụ bụ otu isi dị mfe ị nwere ike ibudata Fortnite APK maka Samsung Galaxy ekwentị gị, ọ bụrụhaala na ị nwere otu ụdị dakọtara na-arụ ọrụ.
Galaxy Watch na Galaxy Home, anyị na-ewetara gị ngwaahịa Samsung ọhụrụ
Site na Galaxy Watch anyị na-ahụ smartwatch nwere atụmatụ dị gburugburu, a na-ewepụtakwa Galaxy Home, onye na-ese okwu smart HomePod.
Ndị a bụ ndị ọnụ na-emelite ka gam akporo achịcha site ugbu a
Anyị ga-agwa gị nke bụ njedebe nke enwere ike imelite ya na android achịcha na ndị ga-enweta mmelite ahụ na izu ndị na-abịanụ.
Logitech weputara chaja ikuku na mmekorita ya na Apple
Na nke a, Apple na Logitech esonyela aka ọzọ, oge a iji nye chaja ikuku nwere atụmatụ dị iche.
Sourcesfọdụ isi mmalite tinye ọkwa izizi nke ụdị a maka August 29 na-esote, mana n'ikpeazụ ọhụrụ ...
Kọmputa kọmputa na TSMC na-akpata nsogbu na mmepụta nke Apple, NVIDIA ma ọ bụ Qualcomm
Nje virus na-eme ka TSMC nwee nsogbu nrụpụta mgbawa. Chọpụta ihe banyere nrụpụta nrụpụta nrụpụta n'ihi nje a.
Ndị a bụ egwuregwu PlayStation Plus na Xbox Live Gold maka August 2018
Oge ezumike eruola, PlayStation Plus gụnyere egwuregwu August n'efu Mafia III na Xbox Live Gold nzọ na For Honor.
Nke a bụ oriọna LED Trust ọhụrụ, otu n'ime ha na ikuku na-akwụ ụgwọ
O doro anya na ọtụtụ n'ime unu nwere chaja n'ụlọ nke na-enye gị ohere ịgba chajị ngwaọrụ eletrọnik gị n'otu maka ndị mepụtara ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka, ntụkwasị obi, gosirila oriọna abụọ ọhụrụ, nke ọhụrụ maka teknụzụ ọgbara ọhụrụ.
Anyị nwalere bọlbụ A60 na Mini si na ụlọ ọrụ Lifx
Anyị na-ewetara gị nyocha nke bọlbụ abụọ kachasị ewu ewu na Lifx, otu n'ime ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ kachasị mkpa.
Ndepụta a na - eme ka ị mara ma ekwentị ekwentị gị dakọtara na Fortnite
Anyị na-egosi gị ndepụta nke ngwaọrụ dakọtara na Fortnite maka gam akporo, echefula ya ma chọpụta ma ọ bụrụ na smartphone gị nwere ike ịme ya.
Vidio a na-egosi anyị iPhone 2018 ọhụrụ arụ ọrụ
Maka izu mbụ nke Septemba, ikekwe izu nke abụọ na nke kachasị ọhụrụ, ụlọ ọrụ ndị Cupertino ga-eweta ụdị ọhụrụ nke iPhone, a Nke a bụ ihe ụdị 2018 iPhone ọhụrụ nwere ike ịdị ka ọ bụrụ na asịrị ndị metụtara ngwaọrụ a akwadoro.
Anyị na-enyocha Ike ekweisi 2 Bluetooth, ekweisi na ezigbo ego
Anyị nwere nyocha na nkọwa niile na njirimara nke ekweisi ike 2 Bluetooth, chọpụta ngwaahịa a.
Google na eweputa iwu ohuru ka ọkwa ya ghara ịbanye na igwe eji eme ihe eji agagharị
N'afọ gara aga, mgbe ụlọ ọrụ Mountain View kwadoro ọkwa ọhụrụ nke Pixel, ọ na-akwa emo na ọkwa nke mepụtara ọhụrụ ahụ. gaa n’okwu ndị a.
Companylọ ọrụ Asia bụ Huawei, wepụtara nsonaazụ ego maka nkeji nke abụọ nke afọ a, a ...
Otu esi akpọ oku vidiyo na WhatsApp ugbu a ha dị
WhatsApp abụrụla ebe ikpo okwu na-achị ụwa, na-ekele maka akụkụ nke eziokwu na ọ bụ ...
Na-aga Andorra? Xiaomi na-akwadebe oghere nke mbụ Mi Store na Andorra la Vella
Mgbe nsogbu ha nwere na ụlọ ahịa Zaragoza na mbido wee gbue oghere ruo oge ikpeazụ ...
Ngwa Aukey kachasị mma nke ị na - agaghị eche n’afọ a
Site n'aka Aukey anyị chọrọ iwetara gị ezigbo ndepụta nke ngwaahịa na ngwaọrụ nke ị gaghị echefu oge anwụ a iji mee ọtụtụ ezumike gị.
HP kpuwere okpueze dị ka onye isi na PC ahịa na Spain
HP na-eduzi ahịa kọmputa na Spain. Chọpụta ihe banyere ahịa kọmputa na nkeji nke abụọ nke afọ a na Spain.
Ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị na-edekọ vidiyo vidiyo, n'agbanyeghị na ọ bụghị usoro kachasị mma maka ...
Anyị ji aka anyị nwere iLife A7, ụdị ọhụụ nke ụlọ ọrụ ndị China na-ekwe nkwa nnwere onwe, akwụkwọ akụkọ na atụmatụ dị oke mma.
Huawei na-arụ ọrụ zuru oke n'ịkwalite ikike okike nke ndị na-eto eto
The Chinese ụlọ ọrụ na-ewere ibu nzọụkwụ karịrị ere nke electronic ngwaahịa na ugbu a, mgbe ...
Enwere m ike ịgba ọsọ Fortnite na PC m? Ndị a bụ ihe kacha nta nke egwuregwu ejiji
Ihe ndị a bụ opekempe chọrọ iji nwee ike ịgba ọsọ nke ọma na PC ọ bụla.
Gịnị bụ Telegram Passport na otu esi eji ya
Telegram Passport, oru ndi mejuputara n'ime Telegram dabere na ngọngọ nke ga - enyere anyị aka ịmata onwe anyị na weebụsaịtị site na data nkeonwe anyị.
Anyị nyochaa Lenovo S5, nke kachasị mma ọnụ ala dị ala
Anyị nwere Lenovo S5 n’aka anyị, ọnụ ala dị ọnụ ala nke ga-efu anyị iche na ndị na-agba ya ego nke ga-efu ọtụtụ ihe.
Anyị na-enyocha Homtom S7, ekwentị dị ọnụ ala na obere okpokolo agba
Anyị nwere Homtom S7 n'aka anyị ma anyị chọrọ inyocha ya ka ị nwee ike ịchọpụta n'onwe gị ihe ọnụahịa ekwentị dị ọnụ ala nwere ike.
Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị na-emesi obi ike na oge mbụ njem ga-eme na narị afọ a
Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị nke Ronald Mallet duziri ekwupụtala echiche nke ga-eme ka ụmụ mmadụ nwee ike ịgabiga oge otu narị afọ a.
Anyị nwere Insta 360 Nano S n'aka anyị, igwefoto 360º kachasị jikọtara ọnụ na iPhone gị, chọpụta ya na anyị.
Apple HomePod ga-enwe nkwado oku ma kwuo Spanish n’oge na-adịghị anya
HomePod na-ewebata nkwado maka oku. Chọpụta ihe banyere ihe na-abịa n'oge na-adịghị anya na okwu Apple nke ọdịda a.
N'okwu a, ụlọ ọrụ nwere isi ụlọ ọrụ ya na Mountain View, California, na-ekwuwapụta ihe omume ọhụụ lekwasịrị anya ...
Facebook ga-egbochi akaụntụ nke ụmụaka na-erubeghị afọ 13. Chọpụta ihe banyere usoro ọhụụ nke netwọkụ mmekọrịta iji lụso akụkọ ndị a ọgụ.
Dekọọ maka Amazon nwere ihe karịrị 100 nde ngwaahịa ere n'oge Prime Day
Agbanyeghị maka ọtụtụ ndị ọrụ, ụbọchị ụbọchị Prime abụghị ihe ọ bụla iji dee n'ụlọ maka usoro onyinye a ...
Twitter kwụsịtụrụ nde nde akaụntụ kemgbe ngwụcha afọ 2017
Twitter mechiri akaụntụ 57 nde na njedebe nke 2017. Chọpụta ihe banyere ọtụtụ nde akaụntụ nke netwọk mmekọrịta na-emechi.
Germany gosipụtara akara dị ịrịba ama ọzọ na agba ọsọ nke njikọta nuklia
Otu ìgwè ndị na-eme nnyocha na German jisiri ike melite stellarator ha, na-eru okpomọkụ na-enwetụbeghị ụdị nyocha ahụ.
Oge ememme Prime Day maka July 17, 2018
Nyaahụ Amazon Prime Day malitere na 12 nke ehihie, ụbọchị nke na-adịgide ruo ...
Anyị nyochaa iLife V8S robot agụụ Cleaner, otu n'ime ndị kasị zuru ezu na kasị ala price
iLife V8S bụ robot nwere ọgụgụ isi nwere nhicha, na-ehicha ma na-ekpochapụ otu ngwaọrụ, ndị a bụ njirimara na ike ya.
Nnukwu ihe nchebe mere ka ekpughe data nke ndị ahịa Telefónica
Ekwentị: Mmebi nche na-ekpughe data nzuzo nke ndị ahịa. Chọpụta karịa maka nnukwu ọdịda a nke metụrụ onye ọrụ n'abalị a.
Mmeghe nke ụlọ ahịa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Xiaomi na mba anyị na-aga n'ihu na nke a ọ bụ ...
Apple gosipụtara ọgbọ nke abụọ nke airplay, airplay 2, na usoro nke Onye Mmepụta Nzukọ afọ gara aga, ...
Mgbanwe na Twitter nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ gị daa
Twitter kwụsịrị ịgụta akaụntụ egbochi dịka ndị na-eso ụzọ. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ewebatala na netwọkụ mmekọrịta.
Ebu na Amazon maka ụbọchị mbụ: enweghị nkwekọrịta na ndị otu ịlụ
Ndị ọrụ Amazon n'ụlọ nkwakọba ihe San Fernando de Henares akpọwo abụbụ ọrụ dabara adaba n'emume Prime Day.
Apple tinyere 1Password na ndị ọrụ ụlọ ọrụ niile
Apple zụtara ikikere 1Password maka ndị ọrụ ya niile. Chọpụta karịa maka ọrụ a nke ha ga-eji ngwa njikwa paswọọdụ.
SPC na-eme ka igwe okwu ekweisi na igwe okwu dị ọhụrụ na-ekpuchi mkpa niile nke ụbọchị anyị taa
Guysmụ okorobịa nọ na SPC na-eweta ekweisi ọhụrụ ha na ndị na-ekwu okwu ikuku na-elekwasị anya na-enye anyị ohere ịmegharị ụda dị mma.
Xiaomi na-aga n'ihu ọha taa na uru nke ihe dị ka nde euro 46.000
O nwere obere ihe anyị ga-ahụ maka nnukwu ụlọ ọrụ China a nke na - eduga ndị ọrụ niile n'isi ...
Drake weputara mmelite maka album Scorpion
Drake weputara mmelite maka album Scorpion. Chọpụta karịa banyere mgbanwe emere na diski na-enweghị ọkwa.
ZTE na-eme ka ihe ngosi iji rụọ ọrụ na United States
Nyere ihe mere na United States na China ụlọ ọrụ, ZTE chọrọ ịnọgide na-arụ ọrụ na ...
Nyocha Smartdrone BT, akwa drone
Taa, anyị na-ewetara gị obere ọrụ anyị nwalere kemgbe ọtụtụ ụbọchị, nke ahụ ahapụkwala anyị ezigbo ụtọ ...
Kidy: Igwe nchọta dị mma maka ụmụaka
Kidy: Igwe nchọta nchekwa echekwara maka ụmụaka. Chọpụta karịa gbasara igwe nchọta ihe a na-eza ọdịnaya adịghị mma.
Ndị ọrụ Spotify na-enweta nkwụghachi maka mgbasa ozi Drake oge niile
Ndị ọrụ Spotify nwetara nkwụghachi maka mgbasa ozi Drake. Chọpụta ihe banyere ego ndị a sitere na ọrụ nkwanye.
Tesla kụrụ 5.000 Model 3s kwa izu
Tesla ruru ihe mgbaru ọsọ nke ịmepụta 5.000 Model 3s n'ime izu. Mgbe ọnwa ole na ole gachara, Tesla mechara nweta atụmatụ ya nke atọ.
Chọta mbara ala ọhụụ abụọ nwere agwa yiri nnọọ ụwa
Otu ìgwè ndị na-enyocha mbara igwe a ma ama achọtala mbara ala abụọ ọhụrụ na mbara igwe nwere ikike ịnabata ndụ n'elu ha.
Japanese Akira Yamaoka ga-aga nke afọ a Barcelona Games World
O doro anya na ọtụtụ n'ime ndị nọ ugbu a amaghị Japanese a akụkọ ifo metụtara egwuregwu vidio, ya mere ịbanye ...
Ngwaọrụ kachasị mma iji gaa oge ọkọchị a
Okpomọkụ ahụ abịala ka anyị wetara gị obere mkpokọta ngwaahịa iji gaa n'oge okpomọkụ a n'ụzọ kachasị mma.
Huawei Y5: 2018, atụmatụ na ọnụahịa nke ntinye ọhụụ ọhụrụ nke Huawei
Ntinye ntinye nke Huawei na-akụ nzọ n'afọ a, Huawei Y5, adịlarị na Spain maka euro 119.
Akụkọ sitere na HBO na Movistar + maka July 2018
Ọ bụ ezie na oge okpomọkụ adịlarịrị n'etiti anyị, ma belata TV, ọrụ VOD bụ isi na-aga n'ihu ịgbasa katalọgụ ha.
N'oge na-adịghị anya, Granada ga-enwe ụlọ ọrụ nchekwa Mi mbụ ya
Mgbe ụfọdụ asịrị na nkọwa banyere ọnọdụ ọhụụ nke ụlọ ahịa Xiaomi ọzọ, ụlọ ọrụ China kwadoro ...
Ndị egwuregwu Fortnite na-emefu ihe ruru $ 80 na nzụta egwuregwu
Ndị na-egwu egwu na-emefu $ 80 na nkezi na ịzụrụ Fortnite. Chọpụta ihe banyere nnukwu ego nke Epic Games ekele maka egwuregwu a.
Anyị nwalere SPC's Alien Stick, gbanwee TV gị na Smart TV
N'ihi SPC's Alien Stick, anyị nwere ike ịgbanye TV anyị ngwa ngwa na Smart TV maka naanị ihe karịrị 50 euro.
LG V40 ga - enwe igwefoto niile
LG V40 ga-abịa na ese foto ise na mkpokọta. Chọpụta ihe banyere ọhụụ ọhụrụ dị elu site na LG nke na-ekwe nkwa ịbụ ihe kachasị mma na akụkụ foto.
Apple ịrụzi laptọọpụ na-ezighị ezi keyboard urukurubụba
Apple ga-arụzi Macbooks na keyboard ntụpọ ntụpọ ntụpọ n'efu. Chọpụta ihe banyere mmemme ndozi ụlọ ọrụ America maka laptọọpụ
Intel CEO gbara arụkwaghịm maka inwe mmekọrịta ya na onye ọrụ
Ọ dị ka Brian Krzanich, CEO nke Intel hapụrụ ọfịs mgbe ọ ghọrọ ọha na ọ nwere mmekọrịta mmekọrịta na onye ọrụ ...
Wacom na-enye mbadamba nkume ndị ahụ iji jiri akụkụ anyị kachasị mma
Wacom na-ewebata anyị 24 Cintiq Pro dị egwu ma dị ike maka ndị na-emepụta ọkachamara, yana Wacom Intuos maka ụdị ndị ọrụ niile.
Homelọ Obere Google, anyị nyochara ezigbo enyemaka inyeaka mgbe ọ bịarutere Spain
Anyị na-anwale Google Home Obere na ebe a anyị hapụrụ gị mmetụta anyị, ọ bụ ezie na site na mbido anyị ga-agwa gị na anyị nwere nnukwu ndakpọ olileanya.
Kedu ka ị ga-esi kwuo biya biya na Russian? Nke a bụ otu n’ime okwu ndị atụgharịrị n’ụwa
Ajụjụ a na-ahapụ anyị ozi ọzọ dị oke mkpa maka ndị nke anyị na-eji ngwa ntụgharị ma ọ bụ ngwaọrụ na ...
Bose Sleepbuds: Igweisi maka ezigbo ụra. Chọpụta ihe banyere ekweisi mbụ nke ika iji gbochie mkpọtụ mgbe ị na-ehi ụra.
Ọ bụghị naanị na Tesla na Apple na-eche banyere mbara ala. SEAT nwere oghere dị 53.000 iji jide anyanwụ
Mgbe anyị na-ekwu maka ume dị ọcha, ụlọ ọrụ ndị America bụ Tesla ma ọ bụ Apple, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, cheta ...
Holidu weputara ngwa ngwa ngwa nke aka ya
Holidu na-ekwupụta mwepụta nke ngwa ngwa ngwa maka gam akporo. Chọpụta karịa otu ngwa ngwa izizi na mpaghara ndị njem.
Homelọ Google na Google Home Mini adịworị na Spain
Ndị ọkà okwu maara ihe nke Google, Home na Home Mini, adịlarị na Spain, maka euro 159 na 59 n'otu n'otu.
Egwu YouTube na YouTube Premium adịworị na Spain
Ọrụ nkwanye egwu egwu Google ogologo oge dị na Spain iji guzogide Apple Music na Spotify
Ghara iji eze gọnarị asịrị banyere mbata nke egwuregwu na Netflix
Izu ole na ole gara aga asịrị na-egosi banyere enwere ike Netflix ga-agbakwunye egwuregwu na ikpo okwu ya iji mezue ọchịchọ ...
I nweghi ike iwe Uber na ngwa Google Maps. Ngwa Google na-ewepu ohere ịnweta akwụkwọ.
Anyị ga-enyocha Energy Tablet Pro 4, mbipụta kachasị ọhụrụ nke kachasị mma na mbadamba sitere na otu Energy Sistem otu na ihuenyo Full HD na Xtreme Sound,
Anyị ga-akpọpu ihe abụọ dị mkpa Smart Force dị mkpa, ihe mkpofu robot Rowenta maka ụdị ala niile anyị nyochara n'ụlọ a.
CUCA, igwe eletrik nwere ike ibu mmadụ abụọ
CUCA bụ igwe eletriki igwe eletrik nwere ihe ruru 40 kilomita na nke ahụ na-enye ohere nke ibugharị ndị njem abụọ
Kapersky na nke European Union
Kapersky Security software adighi enwe ezigbo obi na nzuko omeiwu Europe chọrọ iwepu ya na ...
Na njedebe nke esemokwu ahụ, Maazị Granbomba na-akwụ ụgwọ na ikpe Caranchoa
Mgbe Onye ọka ikpe nyechara iwu, esemokwu ahụ abịala na njedebe, Maazị Granbomba ahapụla na ikpe "Caranchoa" site n'aka ndị ikike ruru eru.
Apple kwuru na o mepụtara ọrụ nde 1,76 na Europe. Nke ahụ bụ eziokwu?
Apple kwuru na o mepụtara ọrụ nde 1,76 na Europe. Chọpụta ihe banyere akụkọ ọrụ ụlọ ọrụ Cupertino.
PlayStation 5 nwere ike iwunye Sony nke akụrụngwa AMD naanị
Dabere na asịrị, ọ dị ka Sony ọ ga - arụkọ ọrụ na AMD na mmepe nke ngwaike akọwapụtara nke ga - enye ndụ na PlayStation ọhụrụ.
Nke a bụ mmelite ọhụrụ nke Microsoft Office 365
Anyị enwetawo mmelite kachasị mkpa na ọnwa ndị na-adịbeghị anya maka Office 365, yana mmelite imepụta na ụfọdụ ngwa ọrụ.
US na njikere mgbe ekwuputara na China ga-ewulite HAARP nke ya
N'agbanyeghi oke echiche ndi mmadu na-agba izu, China ka kwuputara nwube radar HAARP, akuko bu nchegbu di ukwuu na United States.
Lenovo ThinkPad P52, anụ ọhịa nke nwere 128 GB nke RAM
Lenovo Thinkpad P52, laptọọpụ nke chọrọ inye anyị ohere igosipụta ihe ọ bụla na ọ nweghị ihe na-erughị 128 GB nke RAM.
Anyị amụtala na n'abalị anọ nke ọnwa Julai usoro nchekwa mgbanaka ga-ada ahịa na North America site na $ 199.
Tesla ga-agba mbọ ịba uru site na ịhapụ 9% nke ndị ọrụ ya
Mgbe ọnwa ole na ole chere, Elon Musk mechara mezue atụmatụ nhazigharị ya maka Tesla site na ịhapụ 9% nke ndị ọrụ ọrụ.
Ozi PlayStation niile na E3 2018
Ndị a bụ ozi niile sitere na Sony maka PlayStation nke ndị mba Japan wepụtara na E3 2018.
Nkewa 2 nwere mwakpo nke ihe 8, nke a bu ihe egwuregwu nke emere na E3
Obi abụọ adịghị ya, E3 a bụ nke kachasị arụpụta nke ọma gbasara ọkwa ọhụụ na akụkọ metụtara ...
Xiaomi Redmi Rịba ama 5, anyị na-enyocha ọnụahịa nke na-ezube imebi ahịa ahụ
Anyị na anyị nwere Xiaomi Redmi Rịba ama 5 na anyị ga-eme nyocha na arụmọrụ na ule igwefoto ka ị wee hụ ihe ọ nwere ike.
Eletrọniki Arts E3 2018 recap
Nzukọ mbụ dị mkpa nke E3 2018 anọwo na-agụgharị Eletrọniki Arts na ebe ozi ọma pụtara ìhè site na enweghị ya.
Porsche Taycan, nke a bụ aha ụgbọ ala mbụ nke ụlọ ọrụ 100% eletrik
Porsche Mission E enweelarị aha azụmaahịa. Nke a ga - abụ: Porsche Taycan, nke mbụ 100% ụgbọ ala eletriki nke ụlọ ọrụ German
Facebook nyere ndị ọrụ data ụfọdụ ụlọ ọrụ
Facebook nyere ụfọdụ ndị ọrụ data data na ụlọ ọrụ ụfọdụ. Chọpụta karịa gbasara nkwekọrịta nke netwọkụ mmekọrịta ga-enye data a.
Yahoo Messenger ga-apụ n'anya ọnwa na-abịa, ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ugbu a
Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ n'ime anyị nọ ugbu a abanyela na mkparịta ụka akụkọ a na ...
Valve na-ekwu na ọ gaghị ewepụta egwuregwu dị na Steam
Valve ebipụtawo nkwupụta nke ọ na-ekwu na ikpo okwu egwuregwu Steam ga-akwụsị nzacha egwuregwu nwere ike ịchọta na ikpo okwu Steam
ZTE ruru nkwekọrịta na United States iji gaa n'ihu ọrụ ya
ZTE ruru nkwekọrịta iji nwee ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ. Choputa ihe banyere nkwekorita nke ndi China meputara na United States ka ha nwee ike weputa ozo.
Microsoft, mgbe emechara nke mbụ nyocha, ka kwupụtara mwepụta nke abụọ nke Project Natick, nke ihe na-erughị 864 sava ejirila n'okpuru osimiri.
Tesla kpughere ihe osise mbụ nke Model Y. Chọpụta ihe gbasara ụgbọ ala ọhụrụ ahụ, nke ga-abụ obere SUV nke ekwesịrị ịmalite n'afọ a.
Norman: Amamịghe echiche na-eche dị ka psychopath. Chọpụta ihe banyere ọgụgụ isi a nke ndị na-eme nchọpụta na MIT mepụtara.
Nnukwu e-commerce ahụ agbatịala ọtụtụ ọrụ ọ na-enye anyị site na ụgwọ Amazon Prime.
Kwadoro: Amazon ga-ebido Echo na Alexa na Spain afọ a
Amazon ga-ebido Echo na Alexa na-ekwu okwu na Spain n'afọ a. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ika ọhụrụ okwu na Spain na ga-adịghị anya kụrụ ahịa.
Anyị nwalere Smart Force mkpa, Rowenta ọkọlọtọ robot agụụ
Rowenta egosiputala ezigbo enyi, Smart Force Essential, onye na-ehicha ihe mgbochi robot na ihe niile anyị kwesịrị ịmalite n'ụwa nke nhicha kwụ ọtọ.
macOS Mojave ga-abụ nsụgharị ikpeazụ nke macOS dakọtara na ngwa 32-bit
macOS Mojave, ga-abụ nsụgharị ikpeazụ nke macOS nke ga-adaba na ngwa ndị ezubere maka bits 32, ngwa ndị a ga-emelite ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịnọgide na nhọrọ maka ndị ọrụ na Mac App Store.
Ndị ahịa Tesla nwere ike ịnwale autopilot ọhụrụ n'efu. Chọpụta karịa gbasara mkpebi ụlọ ọrụ ikwe ka ndị ahịa nwalee nkwalite ndị a n'efu.
Nkọ na-ahazi nzụta nkewa PC nke Toshiba
Nkọ mere ka ịzụta Toshiba onye ọrụ kọmpụta nkewa. Chọpụta ihe banyere ọrụ a nke Sharp laghachiri akụkụ nke kọmputa.
Inwekwu ikike maka ụdị laptọọpụ niile ekele maka Snapdragon 850
Qualcomm ka kwuputara ọbịbịa n'ahịa nke Snapdragon 850 ọhụrụ, ihe nhazi nke sitere na Snapdragon 845 iji nye njikọ ka mma, ịrụ ọrụ karịa yana ikike dị elu nke ukwuu.
HomeKit na ngwa ụlọ, na-abịakwute Mac ekele maka macOS Mojave
Njikọ HomeKit na Macs na-abịa ekele maka ụdị ọhụrụ nke ụmụ okorobịa si ...
Tesla kwụọla ụgwọ karịa 20% nke ndapụta maka Model 3
Tesla kwụghachiri 23% nke ntinye akwụkwọ Model 3. Chọpụta ihe banyere nkwụsị ụgbọ ala n'ihi ọtụtụ nsogbu na mmepụta ya.
Anyị na-ewetara gị nchịkọta na akụkọ niile Apple gosipụtara n'oge WWDC18 na iOS 12 dị ka sistemụ ọhụụ ọhụụ ya na Augmented Reality.
Google ga - ejikọ aka na Pentagon na mmepe ngwanrọ agha
Oké ọgba aghara nke a haziri n'ime Google mgbe ha mụsịrị na ụlọ ọrụ ahụ na-emekọ ihe na mmepe nke usoro ọgụgụ isi nke na-erughị Pentagon.
Galaxy A9 Star: Samsung ewepụtaghachiri akụkụ nke iPhone X?
Emechara atụmatụ nke Samsung Galaxy A9 Star ọhụrụ. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ site na ụlọ ọrụ Korea nke ha na-ekwu na sitere n'ike mmụọ nke iPhone X.
Microsoft azụtala GitHub, azụmahịa a ga-ekwupụta taa
Microsoft kwupụtara ọkwa gọọmentị nke GitHub. Chọpụta ihe banyere ọrụ a nke ụlọ ọrụ America na-ekwupụta ịzụta nke peeji nchekwa koodu.
Soro ndụ # WWDC2018 na ngosi nke iOS 12 na Actualidad Gadget
Ọ bụrụ n’ịche etu esi esochi WWDC 2018 a ma bie ozi nke ọma na Spanish, ị nweela azịza ya. Nọnyere anyị iji nụ ụtọ mkpuchi nke ngosipụta nke iOS 12 na ikekwe iPhone X SE.
Anyị ji aka anyị dFlow Soul, onye na-asụ Spanish nke bịara nọrọ
Anyị nwere dFlow Mkpụrụ obi n'aka anyị, ọkà okwu 360º na-enye ezigbo ụda na atụmatụ izizi na ọnụahịa dị oke ọnụ, nọrọ na nyocha anyị.
Facebook ga - ewepu ngalaba na - ewu ewu
Facebook ga-ewepu ngalaba na-ewu ewu n'izu a. Ọgwụgwụ nke usoro omume nke netwọkụ mmekọrịta na-abịa, nke na-arụ ọrụ na ngwọta ọhụrụ.
Qualcomm chọrọ ịpinye isi ya na kọmpụta desktọọpụ na Snapdragon 1000
Qualcomm chọrọ ịmalite ịbụ onye ọzọ na Intel na obere desktọọpụ / ike desktọọpụ na Snapdragon 1000
China chọrọ ndị na-eme nchọpụta n'èzí iji nyere aka mepụta ọdụ ụgbọ elu ya n'ọdịnihu
N'adịghị ka ihe a na-eme ugbu a, China mechara kpebie imepe ọnụ ụzọ ya maka ndị na-eme nchọpụta si n'akụkụ ụwa niile ka ha na-emekọrịta ihe n'ichepụta ọdụ ụgbọ elu ụwa ọhụrụ ya.
Spotify na-edozi amụma asị ya. Chọpụta karịa gbasara mkpebi ụlọ ọrụ ahụ maka ịlaghachi azụ mgbe esemokwu izu ndị a gasịrị.
Canon EOS-1V: A naghị ere igwefoto analog. Chọpụta ihe banyere ncheta nke igwefoto analog kachasị ọhụrụ site na akara Japanese.
Ndị a bụ egwuregwu PlayStation Plus na Live na egwuregwu Gold maka June 2018
N'okpuru anyị na-egosi gị nke bụ egwuregwu efu nke Sony na Microsoft na-enye anyị site na ọrụ ndenye aha ha maka Xbox na PlayStation
76 na-ada: egwuregwu ohuru nke Bethesda. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ maka egwuregwu ahụ, nke na-ekwe nkwa ịdị iche na usoro ndị ọzọ.
Microsoft weputara webusaiti akuko maka umuaka
Kidsmụaka MSN: Weebụsaịtị akụkọ Microsoft maka ụmụaka. Chọpụta ihe banyere mmalite nke ụlọ ọrụ weebụsaịtị a na akụkọ na ọdịnaya naanị maka ụmụaka.
Akwụ na-ama ọkwa mbata nke Nnọọ na Spain, ọnwa na-abịa
Mgbịrịgba ọnụ ụzọ igwefoto bụ usoro nke ụbọchị taa ma anyị nwere ozi ọma dị mma maka ndị ...
PUBG Corp gbara ụlọ akwụkwọ Fortnite akwụkwọ maka mmebi iwu nwebisiinka
Obi abụọ adịghị ya, a hapụghị egwuregwu ndị ahụ site na ikpe na nke a bụ ikpe nke Pubg na Fortnite. Ma…
Ọbara n'ọbara dị n'ime Mkpụrụ Obi Ọchịchịrị
Ha na-achọta ọkwa dị na Bloodborne na Mkpụrụ Obi Ọchịchịrị nakwa na nke ahụ na-agbakwa na GTA V. Chọpụta akụkọ a na-adọrọ mmasị nke ga-adọrọ uche gị.
Xiaomi na-akwadebe ụlọ ọrụ gọọmentị ọhụrụ dị nso na Storelọ Ahịa Apple na Puerta del Sol
Anyị ka na-ekwu maka Xiaomi na Actualidad Gadget mgbe nyocha dị egwu nke ọhụrụ Xiaomi Mi Mix 2S ...
Fortnite dọrọ aka ná ntị banyere aghụghọ V-Bucks na YouTube n'efu
Fortnite dọrọ aka na ntị banyere aghụghọ V-Bucks na YouTube. Chọpụta karịa banyere aghụghọ ndị a na-achọ inweta data ma ọ bụ ego n'aka ndị ọrụ na egwuregwu Epic Games a ma ama.
Nyocha nke Xiaomi Mi Mix 2S, anụ ọhịa Xiaomi iji nwaa ịchị na njedebe dị elu
Anyị ji aka anyị ihe akpọrọ ka ọ bụrụ High Killer Range nke afọ a 2018, Xiaomi Mi Mix 2S, ekwentị nke na-abịa na ngwongwo nke izizi na arụmọrụ pụrụ iche.
Sony kwetara na njedebe nke egwuregwu PlayStation 4 na-eru nso
Japaneselọ ọrụ Japan kwadoro na njedebe nke okirikiri nke PlayStation 4 n'ahịa na-aga ime. Ya mere, a na-akwado ala maka ọbịbịa nke njikwa ọhụrụ gị. Anyị ga-amatakwu banyere atụmatụ Sony n'oge na-adịghị anya.
Xtorm bụ ụlọ ọrụ ndị agha ochie na ngwaahịa ikuku na-akwụ ụgwọ na taa anyị nwere otu n'ime chaja kachasị ewu ewu na aka anyị, Xtorm Freedom.
A na-ebo ụlọ ọrụ dị ka Google na Facebook ebubo ịhapụ iwu iwu nchebe ọhụrụ na Europe, ọ bụkwa ya mere ha ji kwuo ka ha kwụọ ndị ọrụ 7.000 nde.
Acer Swift 5, anyị na-enyocha otu ịkụ nzọ kachasị mma na ahịa maka nnwere onwe na njikwa
Acer Swift 5, ihe nlere dị ike n'agbanyeghị na ọ dị mfe ma na-ebugharị ya. Ka anyị matakwuo ya nke ọma, anyị na-ewetara gị laptọọpụ dị elu dị elu karịa otu puku euro.
Tesla Settles Class Action Lawit megide Autopilot ya
Tesla Settles Class Action Lawit megide Autopilot ya. Chọpụta ihe banyere mmezi ụlọ ọrụ eruola maka nsogbu na Autopilot.
Kedu ihe bụ GDPR na kedu ka ọ si emetụta anyị dị ka ndị ahịa?
Nyaahụ bụ ụbọchị ikpeazụ nke ụlọ ọrụ kwesịrị imegharị iwu General General Protection Regulation (GDPR maka acronym ya na bekee)
United States na-enyocha nyocha ọnụahịa dị na Bitcoin
United States na-enyocha nyocha ọnụahịa na Bitcoin. Chọpụta karịa gbasara nyocha a na-achọ ịmara ma agbanweela ọnụ ahịa nke cryptocurrency.
Spotify ga-akwụ nde $ 112 iji jiri egwu na-enweghị ikike
Spotify ga-akwụ nde 112 iji egwu egwu na-enweghị ikike. Chọpụta karịa banyere nnukwu ego nke ụlọ ọrụ ga-akwụ.
A na-enye Vivo APEX, nwere ihu ihuenyo niile na enweghị ọkwa, na June 12
Firmlọ ọrụ Asia Vivo, ekwuputala ọkwa nke Vivo APEX, nke mbụ ga-akụ n'ahịa na-enweghị ụdị akụkụ ọ bụla na ihuenyo ahụ.
Uber imeghe Advanced Technology Center na Paris
Uber na-akwado imeghe forlọ Ọrụ Maka Teknụzụ Advanced na Paris. Choputa ihe banyere ulo oru ohuru ohuru ebe ha gha emepe ugbo ala ugbo elu ha.
Thrustmaster Y-300CPX Far Cry 5 Edition, anyị nwalere ekweisi egwuregwu ndị a maka ndị hụrụ saga n'anya
Oge a anyị nwere Thrustmaster Y-300CPX Far Cruz Edition na-agba chaa chaa, isi okwu nke nwere ezigbo ihe eji eme ihe na ụda, nọnyere anyị ma chọpụta nyocha miri emi.
Facebook na-emepụta ọgụgụ isi nke na-agbanwe abụ na ụdị egwu
Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ọhụụ nke ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ nwere ikike ịgbanwe ụdị egwu dị mfe naanị na sekọnd. Nke a Facebook ọgụgụ isi ga-kụrụ ahịa anya.